China Hot iibinta awooda weyn 3.2V 100Ah LiFePO4 unug batteriga kaydinta tamarta Soo saaraha iyo Badeecada | LIAO
Iibinta kulul awoodda weyn 3.2V 100Ah LiFePO4 unugga baytariga ee keydinta tamarta
Iska caabinta gudaha:Ω2mΩ
Ugu badnaan joogto ah lacagta hadda:1C
Ugu badnaan dheecaan joogto ah:1C
Ugu badnaan dheecaanka kicinta hadda:2C
Nolosha wareega:≥4000 jeer
Heerkulka Charge:0 ° C ~ 55 ° C
Heerkulka dheecaanka:-20 ° C ~ 55 ° C
Heerkulka keydinta:-20 ° C ~ 55 ° C
Cabbir:28.82mm * 147.70mm * 202.47mm
Codsiga:U samee baakado batariyadeed dalabka korantada sida EV
1.Awoodda weyn ee 3.2V 100Ah ee loo yaqaan 'prismatic LiFePO'4 unug batteri oo leh waxqabad wanaagsan.
2. Miisaan fudud: Waa qiyaastii qiyaastii 1/3 miisaan marka la barbar dhigo baytariyada aashitada leedhka.
3. Waxqabadka wanaagsan ee amniga: Waxay u dhowdahay nooca batari lithium-ka ugu ammaansan ee lagu aqoonsan yahay warshadan.
4. Lithium iron phosphate waa nooc cusub oo walxaha koronto ku shaqeeya oo loogu talagalay baytariyada lithium-ion. Waxaa lagu gartaa awoodda dheecaan ballaaran, qiimo hooseeya, sun aan sun ahayn iyo wasakheyn la'aan deegaanka. Wadamada adduunka ayaa u tartamaya sidii ay u gaari lahaayeen waxsoosaarka warshadaha.
5. Qaas ahaan loogu talagalay arjiga korontada sida EV.
Gawaarida korontada ee saafiga ah, marka la barbardhigo gawaarida shidaalka, farqiga ugu weyn (kaladuwan) wuxuu kujiraa afarta qaybood ee waaweyn, mootada wadista, xakamaynta xawaaraha, batteriga korontada, xeedho dul saaran. Marka la barbar dhigo xarumaha shidaalka, waxay ka kooban tahay saldhigyo dawladeed oo degdeg ah. Kala duwanaanshaha tayada gawaarida korontada saafiga ah waxay kuxirantahay afartan qaybood, qiimahooduna sidoo kale wuxuu kuxiranyahay tayada afartan qaybood. Isticmaalka gawaarida korontada saafiga ah sidoo kale waxay si toos ah ula xiriirtaa xulashada iyo qaabeynta afarta qaybood ee waaweyn.
Xawaaraha baabuurta korontada saafiga ah saacadiiba, iyo xawaaraha bilowgu waxay kuxirantahay awooda iyo waxqabadka mootada wadista. Dhererka baaxadda wadista waxay kuxirantahay awoodda batteriga korontada ku shaqeeya. Miisaanka batteriga korontada ku shaqeeya wuxuu kuxiranyahay doorashada batteriga awooda sida leedhka-acid, zinc Carbon iyo baytariyada lithium waxay leeyihiin cabirro kaladuwan, culeys gaar ah, awood gaar ah, tamar gaar ah, iyo nolosha wareega. Tani waxay kuxirantahay meelaynta soosaaraha iyo isticmaalka darajada gaariga, iyo sidoo kale qeexitaanka suuqa iyo qeybta suuqa.
Hore: Iibinta Awoodda sare ee 3.2V 52Ah LiFePO4 unug batteriga loogu talagalay korontada
Xiga: LiFePO4 Qalabka batteriga (unug 8 x 50Ah)